मृत्युको मिति थाहा हुँदा पनि हाँसिरहने कविताराम « Sansar News
४ मंसिर २०७४, सोमबार ०३:११
वरिष्ठ साहित्यकार एवम् लुम्बिनी कपिलवस्तु डे अभियानका विश्व कार्यसमितिका सल्लाहकार प्रो. डा कविताराम श्रेष्ठ मृत्युसँग किञ्चित नडराउने व्यक्ति थिए । आफ्नो मृत्युको मिति थाहा हुँदा पनि कहिल्यै मनस्थिति कमजोर बनाएनन् । शायद परिवारलाई पनि कहिल्यै पनि मृत्युको भय देखाएनन् । सानो रोग लाग्दैमा म त मरि पो हाल्छु की भनेर चिन्तित हुने र चिन्तै चिन्तामा आफूलाई मृत्युतर्फ डो¥याउनेहरुका लागि कविताराम प्रेरणा नै थिए । ।
जीवनको अन्तिम घडिसम्म पनि नथाकि सेवामा जुटेको देखिन्थ्यो । केहि दिन अघिसम्म मुखमा अक्सिजनको सिलिण्डर लगाएर पनि विभिन्न कार्यक्रममा हँसिलो अनुहारमा देखिएका थिए । मृत्युको मिति नजिक नजिक आउँदा पनि आफूले गर्नु पर्ने केही काम छ की भनेर सम्झाइदिन आग्रह गरिरहन्थे । कस्तो व्यक्ति होला आफू यति समयमा मर्दैछु भन्ने जान्दा जान्दै पनि कत्ति पनि पीडा देखिँदैन, यहि कुरा मनमा खेल्ने गर्दथ्यो । मंसिर ३ गते उहाँको देहले सदासदाका लागि यो संसारबाट बिदा लिएको छ ।
उहाँले केही महिना अघि आफ्नो कुराहरु लेख्दै म्यासेन्जरमा पठाउनु भएको थियो । संचारकर्मी भएका कारण कुनै पनि कुराहरु समाचार बन्ने गर्दछ । तर परिवारलाई पीडा हुने गरि समाचार दिन उचित नहुने देखि म्यासेन्जरमा मात्र कुराकानी हुने गर्दथ्यो । हरेक कुराकानीमा कहिल्यै पनि जीवन देखि नथाकेको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । शरीरले नसक्दा नसक्दै पनि अझै आफूले गर्नु पर्ने केही कुरा छुटेको पो छ की भनेर सल्लाह मागिरहने उहाँ सँधै प्रेरणा बनिरहनु हुनेछ । अबका दिनमा उहाँले न त म्यासेन्जरमा ‘मीना बहिनी’ भनेर सम्बोधन नै गर्नुहुनेछ न त कहिले काहिँ भेट हुँदा उहाँको हँसिलो अनुहार नै देख्न पाइने छ । तर उहाँको त्यो हँसिलो मुहार कहिल्यै पनि हट्ने छैन । मृत्यु शास्वत हो, जन्मेपछि मर्नै पर्दछ, मात्र फरक हुन्छ कस्को मृत्यु कति ओझिलो बनेको छ भन्ने मात्र हो । उहाँको मृत्यु साँच्चै ओझिलो बनेको छ । उहाँको आत्माको चिरशान्तिको कामना, शोकसन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना ।
मे २५ २०१७ साँझ ९.५९ मा पठाउनु भएको यो प्रेरणात्मक कुराकानी उहाँकै शब्दमा :
मैले अति नजीक मानेको मेरा प्रिय मित्र गण !
मलाई सन २०१२ मा बोसेआंद्रामा क्यान्सर भाको थाहा भो र त्यस्लाई तत्काल अपरेशन गरी फलियो तर फेरि त्यो फोक्सोमा संक्रमित हुन पुग्यो र आजसम्म किमो लिंदै गरेको स्थिति छ। गतवर्ष जुलाईमा मलाई साढ़े ३ देखि ६ महीना भित्र मेरो मृत्यु हुने आंकलन डाक्टरले सुनाको थियो। तर त्यसै बेलामा नया खाले किमो आएको र त्यसको ऊपचारले मेरो आयु लम्बियो। अझै केही भईहाल्ने म देख्दिन। शरीरमा कुनै कतै पीड़ा छैन। कड़ा साइड इफ़ेक्ट पनि छैन। ओछ्यान कहिल्यै परेको छैन र अहिले त्यस्तो सम्भावना पनि छैन। यो निको हुने भन्ने त होइन तर आयु त लम्बियो नै। डाक्टरले मिति तोकिदिएको घटना पछि मैले बाँकि रहेका पुराना काम र दायित्व सलट्याउने र नयाँ काम बन्द गर्ने काम गरें। त्यसैले हिजो आज मलाई तपाइँहरूले नयाँ केही गरेको देख्नुहुन्न । पब्लिकमा पनि अति छोटो समयमात्र देख्दै हुनुहुंछ। कुनै काम अधुरो नरहोस भन्ने एकमात्र मेरो चाहना छ। यसैमा तपाई साथीहरूको समेत सहयोगको अपेक्षा छ। सम्झाइ दिनुहोला कहीं कतै मैले गर्न केही बाँकी देखिंछ की ? मलाई मर्नुसंग किंचित डर छैन। मर्न त जीवधारी सबैले पर्छ नै। ७० वर्षमा छु। मांछेको आयु त्यस्तै त्यस्तै नै हो। यद्यपि बढी बाँच्ने छन् नै। बाँचुंजेल आफूले जानेसम्म सही ढंगमा बाँच्ने प्रयाश थ्यो र सफल छु भन्ने लाग्छ। केही कतै त्रुटि कमी कम्जोरी छ भने ती नियतवश भएका गरेका होइनन् मेरो क्षमताकै कमी कम्ज़ोरी हो। त्यता पनि पश्चात्ताप छैन। मैले अहिलेसम्म मेरो यो रोगको अवस्थाको सार्बजनिक गरिन। यस्तो थाहा हुने बित्तिकै स्वजन रुने कराउने, हत्तासिने, अनि सहानुभूति दिने गर्न लागि हाल्छन्। म त्यस्तो हंगामा चाहन्न। ५ वर्ष वित्यो र बडो सरल र उस्तै ढंगमा बित्यो। डाक्टरले मिति तोकिदिंदा भने मैले सम्बन्धित नाता गोतामा थाहा दिन आवश्यक सम्झें र तत्काल थाहा दिंए। अहिले भरखर अब चाहिं तपाई नजीकका अन्तरंगी साथिलाई पनि भन्न आवश्यक ठानें। केही त्यस्तो कुनै समस्या वा गाह्रो साह्रो भएर होइन तर मेरो आफ्नै गतिविधिमा कमी भइरहेको अवस्थामा यसको कारक तत्व यो थियो भन्ने थाहा दिने अवस्था आइसकेको मैले सोचें। मैले यो पत्र सार्वजनिक कतै गरेको छैन। तपाई जस्तै मेरा अन्य सीमित अंतरंगी मित्रको बाक्समा मात्र छोड़ेको छु । यति थाहा दिए पछि मैले आफूलाई हल्का भएको महसूश गरेको छु। म यसरी सामान्य ढंगमा जीवितै रहेको अवस्थामा कुनै पनि सfमाजिक संजालमा यो मेरो स्वास्थ्यको अवस्थाको हल्लीख़ल्ली नहोस त्यती भने मैले तपाइँबाट अपेक्षा राखेको छु। धन्यबाद।